Vaping ny tanora ambongadiny dia nidina 29% tamin'ny taona 2020, fanadihadiana momba ny CDC dia mampiseho ny orinasa sy mpanamboatra | SMOORE
Ny valim-panadihadiana vaovao navoakan'ny CDC dia nampiseho fihenan'ny 29 isan-jato nandritra ny taom-pilalaovana nanomboka tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2020, nitondra izany tamin'ny ambaratonga hita farany talohan'ny taona 2018. Mazava ho azy, ny CDC sy ny FDA dia nisafidy fomba iray hafa hanehoana ny valiny.
Ny valiny voafantina (fa tsy ny angona niavian'izy ireo) dia ampahany tamin'ny tatitra CDC navoaka tamin'ny 9 septambra - tamin'io andro io ihany no fe-potoana farany tokony hametrahan'ny mpamokatra vap ny Premarket Tobako Applications na fanesorana ny vokariny amin'ny tsena. Ho hita ny angon-drakitra, miaraka amin'ny famakafakana ny valiny rehetra, amin'ny volana desambra.
Ny fampiasana 30 andro lasa (antsoina hoe "fampiasana ankehitriny") teo amin'ireo mpianatra tao amin'ny lisea dia nidina hatramin'ny 27,5 isan-jato ka hatramin'ny 19,6 isan-jato, ary ny fidinana teo amin'ireo mpianatra antonony dia nampitolagaga kokoa, hatramin'ny 10,5 ka hatramin'ny 4,7 isan-jato. Vaovao tsara izany, sa tsy izany? Eny ary ...
"Na dia maneho ny fihenan'ny fampiasana sigara e-sigara ankehitriny aza ireo data ireo nanomboka ny taona 2019," hoy ny mpandinika CDC sy FDA, "3.6 tapitrisa ny tanora amerikana mbola mampiasa e-sigara amin'izao fotoana izao tamin'ny taona 2020, ary amin'ireo mpampiasa ankehitriny, maherin'ny valo amin'ny 10 no nilaza fa nampiasa e-sigara misy tsiro. ”
Nanolo-kevitra ny mpanoratra fa satria mbola misy ny vokatra misy tsiro, ny vaping an'ny zatovo dia tsy hidina amin'ny haavony (aotra) mihitsy izay hanomezana fahafaham-po ireo baohbah mifehy ny paraky CDC sy FDA. Ka ny tatitra dia mandeha amin'ny antsipiriany be momba ny safidin'ny tsiro an'ireo mpampiasa tsindraindray ireo, manamarika fa ny voankazo, mint ary menthol no karazan-tsiro ankafizin'ny tanora vaza rehetra. Ny fiheverana fa ny tsiro dia manosika ny fampiasan'ny tanora adala dia mandreraka, fa ny sasany amin'ny fanadihadiana dia mahaliana.
Ohatra, eo amin'ireo "mpampiasa poleta sy cartridge efa nomanina misy tsiro, ny karazan-tsiro fampiasa matetika dia ny voankazo (66,0%; 920,000); mint (57,5%; 800,000); menthol (44,5%; 620,000); sy vatomamy, tsindrin-tsakafo, na vatomamy hafa (35.6%; 490,000). ”
Saingy Juul Labs, izay mahatonga ilay toa vape malaza indrindra eo amin'ny tanora, dia nanala ny voany voankazo tao an-tsena herintaona mahery talohan'ny nahavitan'ny fanadihadiana. Tsy nisy na dia iray aza amin'ireo mpanamboatra lalàna lehibe an'ny paiso prefilled izay samy nivarotra vokatra misy voankazo na vatomamy tamin'ny fotoanan'ny fanadihadiana ihany koa. Manondro izany fa ny ampahany betsaka amin'ny "mpampiasa ankehitriny" dia miangona amin'ny vokatra an-tsokosoko sy mainty toy ny pod-mifanaraka amin'ny Juul nataon'ireo mpanamboatra tsy nahazoana alàlana.
"Raha mbola misy sigara e-sigara sisa tavela eny an-tsena, dia handray an-tanana azy ny ankizy ary tsy hamaha ity krizy ity isika," hoy ny filoham-pirenena Campaign Free Kids, My Myk. Mazava ho azy fa mihatra amin'ny tsena mainty koa izany. Ny fandrarana ny tsiro dia tsy hitarika amin'ny fifadian-kanina, fa amin'ny fividianana loharano vaovao sy mampiahiahy fotsiny.
Ny tatitry ny CDC dia nilaza fa ny fampiasana vokatra azo dia nitombo nanomboka tamin'ny 2,4 isan-jato tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 26,5 isan-jato tamin'ny taona 2020 - fiakarana 1.000 isan-jato! —Tsy nanazava fa ireo vokatra ireo dia valin'ny tsena mainty tamin'ny fanapahan-kevitr'ireo mpanamboatra pod ara-dalàna hiala tsiro, ary taty aoriana ny fanapahan-kevitry ny FDA hametraka ho laharam-pahamehana ny fampiharana amin'ny vokatra miorina amin'ny pod. (Misy teôria tsikombakomba mampihetsi-po izay milaza fa ny fanapahan-kevitry ny FDA hanafoana ireo zavamaniry azo avela avy amin'ny torolàlana fampiharana ny volana janoary 2020 dia fanandramana hijerena raha hamaly haingana ny tsenan'ny vape tsy ara-dalàna. Nahavita izany.)
Ny fehiny dia nilatsaka tokony ho ny ampahatelony ny vaping any amin'ny lisea ary ny antsasa-manilan'ny sekoly ambaratonga faharoa. Ny zava-misy fa maherin'ny 80 isan-jaton'ny tanora no mampiasa vokatra vaping misy tsiro mena, satria efa fantatsika fa ny ankamaroan'ny vape an'ny olon-dehibe koa dia tia fofona tsy paraky, ary ireo tsiro ireo dia tsy iray amin'ireo antony voalohany manandrana miova ny ankizy.
Misy olana hafa amin'ny NYTS ankoatry ny fientanentanana amin'ny tsiro. Ny CDC dia nanala ireo fanontaniana manokana momba ny rongony vaping amin'ny fanadihadiana, namela ny mpandray anjara hanapa-kevitra raha toa ka mihatra amin'ny vona THC sy nikôtinina ireo fanontaniana. Tsy fantatsika hoe firy amin'ireo ankizy manao ny fanadihadiana no vapera THC, satria mihevitra ny CDC fa nikôtinina avokoa izy ireo, ary mitatitra ny valiny raha toa ka misy izy ireo.
Mety ny fahatahorana (tena mitombina) an'ireo cartridge vape THC tsy ara-dalàna nahatonga an'i "EVALI" no nanosika ny etona rongony rongony marobe am-pianarana hijanona tsy hampiasa ireo vokatra ireo. Tsy fantatsika akory ny haben'ny vapes misy menaka hash tsy ara-dalàna nilalao tamin'ny valan'aretina tanora "2018-19", saingy fantatray fa nanjary nalaza teo amin'ireo tanora mpampiasa rongony ireo vokatra ireo nandritra izany fotoana izany (2017-2019 ).
Olana iray hafa amin'ny valim-pifidianana vonjimaika: nanapa-kevitra ny CDC fa tsy hanome tarehimarika fifohana sigara 2020. Tamin'ny taon-dasa, ny fampiasana sigara 30 andro dia nidina ambany ambany indrindra amin'ny 5,8 isan-jato ho an'ny mpianatra amin'ny lisea, ary 2.3 isan-jato monja amin'ireo mpianatra antonony. Mbola nitohy ve izany fironana izany tamin'ny taona 2020-sa ny fihenan'ny vaping dia nitombo ny fifohana sigara mahafaty? Tsy hahalala isika mandra-pahatongan'ny volana desambra, satria na inona na inona antony, tsy tian'i CDC hahita ny valiny isika izao.
Ny "fomban-drazana" famoahana voka-pifidianana vonjimaika avy amin'ny NYTS dia natomboka tamin'ny taona 2018 avy amin'ny kaomisera FDA tamin'izany fotoana izany, Scott Gottlieb, izay te-hampiseho zavatra mivaingana hanohanana ny filazany fa misy fironana miovaova "mampiahiahy". Saingy nandany volana maro tamin'ny fametrahana ny lampihazo izy talohan'ny namokarany isa hamerenany ny resany.
"Mino aho fa misy ny valan'aretina fampiasan'ny tanora," hoy i Gottlieb tamin'ny 11 septambra 2018. "Manana antony marim-pototra hamoahana an'ity fehin-kevitra ity isika mifototra amin'ny fironana sy ny angona hitantsika, ary ny sasany amin'izy ireo dia mbola savaranonando ihany ary vita tamin'ny volana ho avy ary naseho ampahibemaso. ”
Gottlieb dia nandrahona ny handrara ireo vokatra misy tsiro ary hisintona ireo vape pod c-store malaza indrindra eny an-tsena. Herinandro taty aoriana, nanambara fanentanana vaovao fanoherana ny vaping ny FDA. Ny afovoany dia dokambarotra iray tamin'ny fahitalavitra antsoina hoe "Epidémie", izay ninoan'ny saina mazava tao amin'ny biraon'ny fanaraha-maso paraky tao amin'ny FDA fa hampatahotra ireo tanora mitady fatratra hiala amin'ny vaping.
Rehefa noroahina tamin'ny farany ny valim-panadinana NYTS tamin'ny voalohan'ny volana Novambra tamin'ny volana Novambra, nilentika ny haino aman-jery vaovao - notarihin'i Gottlieb, ny fampielezan-kevitra sy ny fampielezana hevitra tsy misy farany avy amin'ny vondrona anti-sigara. Ny tahan'ny "fampiasana amin'izao fotoana izao" dia nisondrotra tamin'ny 11,7 ka hatramin'ny 20,8 isan-jato!
Izay tsy vitan'ireo masoivoho — satria tsy nanao izy ireo te ny — dia nanome ny teny manodidina. Ny porofon'ny valanaretina mampatahotra dia nifototra tamin'ny fampiasana 30 andro lasa izay fenitra mampiahiahy handrefesana ny fitondran-tena mahadomelina. Ny fampiasana zavatra indray mandeha tamin'ny volana lasa dia tsy porofon'ny fampiasana mahazatra, indrindra ny “fiankinan-doha.” Mety tsy hampiseho zavatra manelingelina hafa noho ny lamaody io.
Ny fandinihana tsara ny valin'ny NYTS 2018 nataon'ny mpikaroka avy amin'ny New York University (sy ny oniversite hafa) dia naneho fa 0,4 isan-jaton'ny mpandray anjara tamin'ny fanadihadiana dia tsy mbola nampiasa vokatra paraky hafa. ary vap tamin'ny andro 20 na maromaro isam-bolana. Raha atao teny hafa, dia efa nifoka ireo vapera matetika indrindra tany amin'ny lisea.
"Ny vaping dia nitombo teo amin'ny tanora amerikana tamin'ny taona 2018 ny taona 2017. Ny fiakarana dia miavaka amin'ny endrika tsy fahita firy [30 andro] fihenan'ny vaping sy ny fampiasana poly-vokatra avo lenta ary ny fihenan'ny vaping eo amin'ireo vapera naïve matetika kokoa," namarana ny mpanoratra.
Rehefa naneho fiakarana hafa ny NYTS 2019, avy amin'ny 20,8 ka hatramin'ny 27,5 isan-jato, ny valiny raiki-tahotra avy amin'ny manampahefana sy ny haino aman-jery dia azo vinavinaina; fitadidiana hozatra fotsiny io. Saingy tsy niova ny tantara. Vondrona akademisiana anglisy izay nijery ny valin'ny fanadihadihana CDC tamin'ny taona 2018 sy 2019 dia nifanaraka tamin'ny famakafakana ny vondrona NYU.
"Ny fampiasana matetika dia nitranga tamin'ny 1.0% n'reo mpampiasa paraky paraky raha tsy izany tamin'ny 2018 ary 2,1% tamin'ny 2019," hoy izy ireo nanoratra. "Anisan'ireo mpampiasa sigara e-sigara tsy misy afa-tsy 30 andro amin'ny taona 2019, 8,7% no nitatitra ny filàny ary 2,9% no nilaza fa te hampiasa ao anatin'ny 30 minitra aorian'ny fifohazana."
Ireo valiny ireo dia tsy manondro fa ny ankizy dia "voadona" na "andevozin'ny fiankinan-doha", toy ny fampielezan-kevitra ho an'ny Ankizy tsy misy sigara sy ny Initiative momba ny fahamarinana navoakan'ny anjom-baovao. Ny fampiasana 30 andro lasa dia maneho fanandramana fa tsy fampiasana mahazatra. Ny "fiankinan-doha" dia tsy mahatratra tampon-tantara manan-tantara ary latsaka ny 30 isan-jato amin'ny manaraka - fa ny lamaody ho an'ny tanora kosa dia miakatra matetika ary milatsaka haingana amin'ny endriny tahaka izany.
Ny marina tsy voatanisa dia ny tanora amerikana tsy mifona matetika na mahery kokoa noho ny avy any Angletera na amin'ny toeran-kafa rehetra. Saingy ny manam-pahefana amerikana dia mamaritra ny vaping adolescent amin'ny fomba natao hampihorohoroana ny olon-dehibe. Ary raha mbola vitany ny hahatratra ny vokany nokasaina dia tsy misy zavatra miova.
Sigara hafanana, E Kitapo Blitter sigara, Solony mifoka, E sigara etona ranoka, Newport E sigara, Epen,